सँसारभर प्रसिद्ध हाँस्य कलाकार मिस्टर विनले जन्मदिन पछि नै गरे यस्तो घोषणा! – PathivaraOnline
Home > मनोरञ्जन > सँसारभर प्रसिद्ध हाँस्य कलाकार मिस्टर विनले जन्मदिन पछि नै गरे यस्तो घोषणा!
सँसारभर प्रसिद्ध हाँस्य कलाकार मिस्टर विनले जन्मदिन पछि नै गरे यस्तो घोषणा!
admin January 7, 2021 January 7, 2021 मनोरञ्जन, रोचक	0
बिश्वप्रसिद्ध हास्य कलाकार मिस्टर विनलाई अब मिस्टर विनका रुपमा देख्न पाइने छैन ।
उनले कलाक्षेत्रबाट विदा लिएका छन् । उनले अब मिस्टर विनको भूमिका नगर्ने घोषणा गरेका छन् । पेशाले इन्जिनियर रोवान एट्कीन्सन पहिलो पटक ३ दशक अघि यो भूमिकाबाट हास्य जगतमा उदाएका थिए । उनको हास्य साम्राज्य फैलिँदै गयो र टेलिभिजनमा सर्वसाधारणको पहुँचसँगै उनी बिश्वभर चर्चित हुँदै गए ।
आफूलाई विश्वव्यापी स्टार बनाउने मिस्टर विनको भूमिका अब आफ्नो लागि थकाइलाग्दो भएको रोवानले बताएका छन् । यद्यपि उनले कार्टुन सिरिजमा मिस्टर विनको लागि आवाज दिन भने जारी राख्नेछन् । मिस्टर बीनको एउटा कार्टुन फिल्म अहिले निर्माणको क्रममा छ ।
हार्दिक बधाई : डिग्री पास गर्ने चेपाङ समुदायकै पहिलो चेली सितामायालाई !
खुशीकाे खबरः अब नेपालमै भेटियो कोरोनासँग ल’ड्न सक्ने प्रचुर क्षमता भएको जडीबुटी !
यस्तो अचम्मकाे भ्यागुतो जस्ले तपाईँ गर्भवती भए-नभएको पत्ता लगाउन सक्छ!
नेपालगञ्जमा यस्तो चमत्कार : भेटियो चाँदी जस्तो टल्किने शिवको मूर्ति, ॐ लेखेर सेयर गर्नुहोस्